Gimli, yekumberi-kumagumo yekuwedzera yeiyo Visual studio kodhi mukuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura mugadziri akaunza kuwedzerwa kutsva kweMicrosoft yakavhurika sosi kodhi mupepeti, Visual Studio Code (mupepeti ikozvino aripo pa snap kurongedza).
Iyo zita reGimli yekuwedzera ndeyekuona chirongwa chekushandisa kune vanogadzira-ekupedzisira-vanovatendera ivo kuti vagadzire, vashongedzere kodhi yeiyo template iripo, kupinza tsika snippets, nezvimwe.
1 Gimli maficha makuru
2 Gimli achiri muchimiro che beta
Gimli maficha makuru
Kugadzira marongero akaomarara ane simba kazhinji inoda kushandiswa kweGridhi neFlexbox. Kudzidza zvese zvinokwanisika zvivakwa uye kudyidzana kwavo zvinogona kuoma.
Gimli anogadzirisa iri dambudziko nekupa maturusi ekuona ayo anorerutsa maitiro aya.
Mu "mode présentation", Gimli inogonesa ekushandisa maturusi zvichienderana nechinhu chakasarudzwa.
Semuenzaniso, kana chiratidziro chechimwe chinhu chikaiswa kuGiredhi, seti yeGrid-based maturusi anozogoneswa.
Kana chinhu chiine chinhu chemubereki chine chinoratidza chivakwa chakaiswa kuFlex, seti yezvishandiso yakanangiswa pazvinhu zvinochinja zvinogoneswa, zvichingodaro.
NaGimili unogona kufamba nyore nyore kuburikidza nemafaira ako nebasa racho "Kutsvaga sosi" yaGimli.
Kuwedzeredzwa kwacho kunokutendera kuti iwe uwane pakarepo kodhi yekodhi yemitemo yeCSS uye zvinhu zveHTML.
Paunosarudza chinhu cheHTML kubva pane yako template, kungobaya bhatani pane "sosi" bhatani rinobva ravhura kodhi yekodhi yechinhu icho kana mutemo weCSS.
Gimli zvakare inokutendera iwe kuti ushandise masitaera nebasa racho Gimli "Nyorera zvitaera", unogona kuona kuti ndeapi masitaera akawedzerwa, kubviswa kana kuchinjwa. Iwe unogona ipapo kuisa zvese kana chikamu cheaya akasiyana masitaera.
Kunge chero mabhurawuza ekuvandudza maturusi, Gimli yakagadzirirwa kushanda nechero hurongwa kana raibhurari yawakasarudza kushanda nayo.
Zvinoenderana nevakagadziri, kusvika parizvino, Gimli yakaedzwa neReact, WordPress, Bootstrap, VueJS, Angular, uye Stencil.
Uye zvakare, zvinoenderana nemusiki wayo, Aya maficha mana ataurwa pamusoro apa ingori ongororo yesimba rekuwedzera.
Aya maficha anomiririra iwo anonyatso shandira iyo yekuwedzera Gimli panguva ino.
Gimli achiri muchimiro che beta
Developer yakafumura chishandiso ichi icho chiripo mubeta uye chinofanira kunge chiripo panopera kota yechitatu kana kutanga kwechina yechina ya2019 uye kuburitswa kwayo kwekutanga kwakadzikira kwakarongerwa kutanga kwa2020.
Ikozvino pane zvishoma tsananguro nezveGimli kubva kune akagadzira. Chinhu chimwe chaakavimbisa kugadzirisa sezvo dhizaini yaGimli ichienderera mberi.
“Kusiyana nemamwe mapuratifomu ebudiriro, Gimli ndeyevatangi vemberi. Gimli haisi mhinduro "isina kodhi".
Pane kudaro, inoedza kusanganisa maturusi ekuona anowanzo kuwanikwa mune 'isina-kodhi' mhinduro pamwe neayo Visual Studio Code yekuvandudza nharaunda, 'akatsanangura.
Nezve ayo mafaro, Gimli ine diki script iwe yaunofanirwa kuisa mukati mekuvandudza kwako, kumisikidzwa kwayo kungave kuri nyore uye kunogona kuitwa nerubatsiro rwekuunganidza maturusi sewebhu webhu kana manyore.
Nenguva nezviwanikwa zvinodikanwa, isu ticharamba tichivandudza maficha aripo nekushandisa zvinhu zvitsva senge typography uye zvinyorwa zvemavara, kugona kuendesa tsika yekodhi snippets, maonero uye maturusi ekushandura, HTML kutumira kunze uye fomati, maonero DOM muti uye maturusi e mavara uye mamaki.
Izvozvo zvakati, Iko hakuna beta vhezheni yeiyo yekuwedzera inowanikwa yekuyedza, iri kudairwa nharaunda.
Ivo vanotenda kuti izvi zvichabatsira iye mugadziri weGimli kuwana mimwe mipiro kubva kunharaunda uyezve mhinduro pane chero zviputi kana natsurudzo dzavanogona kugadzirisa kana kupa kune chigadzirwa.
Kune rimwe divi, vamwe vanhu vakataura kuti chirongwa ichi chakavhurwa sosi.
“Rimwe zano randingaite nderekuti chirongwa ichi chivhurike sosi kana kuti yemahara yekushandisa wega.
Izvi zvinounza vashandisi vazhinji vanozoda kuve nemidziyo yakafanana munzvimbo yavo yebasa. Ipapo unogona kuzowana marezinesi ebhizinesi aunobhadharisa makambani, ”anodaro mumwe wavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Gimli, yekumberi-kumagumo yekuwedzera yeiyo Visual studio kodhi mukuvandudza
Microsoft neCanonical kuburitsa Visual Studio Code seyenyore package